'बाँचेका एलबीहरू'को चित्कार !- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
'मरेपछि बयानको गीत गाउने संसारको रीतलाई एलबीले बाँचेका बेला थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ । एलबीको मृत्युसँगै मृत्युशय्यामा लय र शब्द भर्ने दुनियाँले उनको अस्वस्थताको खोजी किन गरेन ?'
माघ ८, २०७८ सुशीला तामा‌ङ
टीभी टुडे टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार एलबी विश्वकर्माको निधनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल जसरी तातियो त्यसरी नै मेरो मथिङ्गल तातिएको छ । एलबीसँग मेरो नजिकको चिनजान र भेटघाट नै नभए पनि एकै पेसाले भावनात्मक सम्बन्ध भने रहने रहेछ । त्यही सम्बन्धले आइसोलेसनबाट यो ब्लग लेख्दैछु । होम आइसोलेसनको बसाइ एक हप्ता हुँदै छ ।
सूचनाकै लागि भेटघाट, कुराकानी, छलफलमा दिन काट्नेहरूका लागि आइसोलेसनको बसाइँ साँच्चै कठोर रहेछ । संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा एक्लो भएकी म शारीरिक रुपमा केही तङ्ग्रिँदै थिएँ । एलबीको मृत्युले भने मानसिक रूपमा नराम्रो झट्का दिएको छ । जति जति सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट भएका शब्दहरू पढ्दै गएकी छु, त्यति नै मलाई असह्य पीडा हुँदै छ ।
सामाजिक सञ्जाल यतिबेला एलबीको मृत्युशोकमा छ । एलबीका गुण, अक्षर र उनले सञ्चार जगतमा छोडेका पदचापबारे एकदिने शोक मनाउने धेरै छन् । उनीहरूले उनको गरिबी र अभावको शोक धून गाउँदै हिँडेका छन् । यतिसम्म कि एकै हजार नोटको अभावले मृत बनेर लडेको एलबीको शरीरदेखि पशुपति आर्यघाटसम्मको खबरलाई बेपर्बाह उनका आफ्नै हुँ भन्नेहरुले हावाको वेगमा उडाइरहेका छन् । त्यही हावाको वेगमा उडेको एलबीको आत्माले सायद पत्रकारिता क्षेत्रलाई कुरीकुरी गरिरहेको होला ।
कठै ! त्यसैबेला पत्रकारिता र पत्रकारको हित, संरक्षणका लागि पहरेदार बन्छु भनी खडा भएको नेपाल पत्रकार महासंघलाई भने स्तब्ध र दु:खी बनाएको छ । महासंघले एलबीकै नाममा लेखिदियो ‘पत्रकारिता क्षेत्रले एक कुशल, उर्जाशील, जुझारु युवा पत्रकार गुमाएको छ ।’ यति लेख्न पनि महासंघले सायद दुई चार घण्टा सामाजिक सञ्जालको सर्भे गर्‍यो होला भन्ने ठान्छु । ‘के एलबी साँच्चिकै पत्रकार नै थिए ?’ पत्रकारिता क्षेत्र र पत्रकारकै नाममा खडा भएका महासंघ जस्ता निकायले कुनै कलम ढलेपछि मात्र पत्तो पाउँछ । एलबीको मृत्यु, महासंघको शोक विज्ञप्ति सायद यो कुनै नौलो अभ्यास पक्कै होइन ।
पत्रकारिताका एलबीहरू ढली नै रहेका छन् । तिनका मृत्युगान दुई/चार दिन दुनियाँले गाइदिन्छन् । त्यसपश्चात् गुमनाम हुन्छन् एलबीहरू र तिनका योगदान । जसले जीवनभर आफ्नो आवाज दबाएर अरुको आवाज उठान गरिरहन्छ, त्यसैको मृत्यु गुमनाम हुनु यो देशको, पत्रकारिताको कत्रो दु:खद पक्ष । मृत्युपछि मात्र श्रमजीवी पत्रकार थिए भनेर चिनाउनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ? बाँचेका 'एलबी'हरूले अब कोबाट के आशा राख्ने ?
म सोचिरहेकी छु । सायद सरम हुनुपर्ने हो एलबीलाई आफ्नो भनी दाबी गर्नेहरूलाई । ‘ओ हो ! छल गर्‍यौ यार, कति निठुरी बनेर गयौ, हिजो, अस्ति मात्र भेटेको, कुरा गरेको, समस्या के छ भनेको भए हुने यति दु:खद हुने थिएन,.....!’ सामाजिक सञ्जालमा ओकेलिएका यस्तै शब्दहरु पढेर मलाई भाउन्न छुटेको छ ।
एलबीको शरीर विलीन भएपछि जे भने पनि या जे लेखे पनि यो दुनियाँलाई छूट छ । मरेपछि बयानको गीत गाउने संसारको रीतलाई एलबीले बाँचेका बेला थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ । एलबीको मृत्युसँगै मृत्युशय्यामा लय र शब्द भर्ने दुनियाँले उनको अस्वस्थताको खोजी किन गरेन ? के उनको गरिबी र अभावलाई नजिकबाट नियाल्ने तिनीहरूमध्ये कोही थिएनन् ? यदि थिए भने यो अनावश्यक हल्ला कसका लागि ?
एलबी तिमीले कसैलाई नभनिकन गएको भए पनि ठीकै गर्‍यौ । यो दुनियाँले गर्ने भनेकै सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गर्ने उही रेडिमेड ‘टेक केयर’ र ‘गेट वेल सुन’ मात्र हो । त्यो पनि धेरैको जबरजस्ती देखावटी आउला । जुन कुरा मैले आइसोलेसनमा भोगिरहेको छु । मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा म निसास्सिएको कुरा यहाँ कसलाई पर्वाह हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा मेरो केही छ भन्नु नै दुई/चार वटा बाइलाइन नै हुन् ।
वास्तवमा एलबीहरुलाई केही गरी सुख छैन । मरेर जाने एलबीले नामसँगै पत्रकारको संज्ञा पायो तर तीन वर्षे छोरोलाई टुहुरो बनायो । के यसको बारेमा मिडिया उद्योग खोल्ने मालिक र महासंघले सोच्नुपर्दैन ?, शोक विज्ञप्ति मात्र निकालेर पञ्छिन मिल्छ ? अब बाँच्नेहरुलाई बचाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो अहिले तत्कालै दिनुपर्ने जवाफ ठान्छु म ।
आज महामारीबाट शिथिल बनेको देशमा थुप्रै बाँचेका एलबीहरू भोकै कलम समातिरहेका छन् । एउटा मास्कको भरमा माइक र बुम समातेर लडिरहेका छन् । एलबीहरूलाई घर भाडा, रासन, ग्यास, परिवारको लानलपालनसँगै देशको चिन्ता छ । अधिकांश एलबीहरूको मुटुमा आर्थिक भारको ज्वाला दिनदिनै बढिरहेको छ । आर्थिक तथा मानसिक चपेटाको बाबजुद दौडिरहेका कतिपय एलबीहरूको जीउ, ज्यानको सुरक्षा छैन । कतिबेला, कुन ठाउँमा कसरी ढलिन्छ भन्ने एलबीहरूको टुंगो छैन ।
दिनभरि भोको पेटको कथा लेख्ने एलबीहरू राति भान्सामा खाना नपाक्दा रोएका छन् । संक्रमित यति छन्, यस्ता छन् भनेर दुनियाँलाई सुनाउने एलबीहरूले म पनि मान्छे न हुँ, मलाई पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने फुर्सद पाएका छैनन् । एलबीहरूको पीडामा मस्त छ पत्रकारिताको घर हाँक्नेहरू । यसरी नै एलबीहरू तिम्रो घरबाट अस्ताउँदै जाने हो भने पक्का एकदिन मसानघाट बन्ने छ ।
एलबीहरूलाई कठिन छ भन्ने कुरा जताउन लासै प्रमाण देखाउनुपर्ने पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारलाई यो कस्तो न्याय हो ? पत्रकारितामा अझै कति पुस्तासम्म एलबीहरूले आहुति दिइरहनुपर्ने हो ? पत्रकारिताका नाममा एलबीहरूमाथिको राजनीति अब नगर ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७८ १३:५०